विविध Archives - Page 8 of 12 - Saptakoshionline
काठमाडौँ । चर्चित नायिका तथा निर्देशक रेखा थापाको निर्देशित चलचित्र मालिकाको दोस्रो गीत सार्वजनिक गरिएको छ ।’सर सर हावा बहन्छ कता हो’ बोलको गीत सोमबार युटुब मार्फत सार्वजनिक गरिएको हो ।’हल्का मायाँ के माया ‘ बोलको गीत निकै हिट भए लगत्तै रेखाले नयाँ गीत सार्वजनिक गरेकी हुन् । आस्था राउतको स्वर रहेको उक्त गीतमा शब्द तथा संगीत सुरेश अधिकारीको रहेको छ । आस्था राउतको स्वर रहेको गीतको भिडियोमा फिल्मक...
फेसबुकका सीईओ मार्क जुकरबर्ग समेतले स्थापना गरेको गैरनाफामुलक संस्थाले अमेरिकी सरकारले सिमाक्षेत्रमा छुट्याएका आप्रवासी परिवारका पक्षमा काम गरिरहेको छ । एफडब्ल्युडी नामक संस्था मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स र रेड होफम्यानले स्थापना गरेका हुन् । यो संस्थाले आप्रवासीहरुका हितमा अमेरिकाको अध्यागमन सुधारका पक्षमा गर्न सकिने कामका लागि पहल गरिरहेको छ । ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी सिमाक्षेत्रबाट अमेरिका आउन...
झट्ट सुन्दा पत्यारै नलाग्ने । तर, भारतको सहर लुधियानाका त्रिसनिस अरोडाको यो कथा वास्तविकता हो । नपत्याएर सुखै छैन । अरोडा भारतका सबैभन्दा कान्छा सिइओमध्ये एक हुन् । केही अघि फोब्र्स पत्रिकाले सार्वजनिक गरेको ‘एसिया थर्टी अन्डर थर्टी’मा आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेका अरोडा अहिले २३ वर्षका भए । उनले २१ वर्षको उमेरमा नै आफ्नो कम्पनी खोलेका थिए । कान्छा सिइओहरुको सूचीमा आफ्नो नाम आओस् भनेर नै उनको यो क...
बहिनीलाई सबैले हिरोनी भन्छन् । हुन पनि साह्रै राम्री छे । ‘ओहो, यो छोरी त कति राम्री छे, यसलाई पाउने केटा त कति भाग्यमानी होला है ? खोट लगाउने ठाउँ कतै छैन’, आफन्त सँगीसाथीले उसलाई सधैं यही भनेर फुक्र्याउँछन् ।बा भने छोरी सुहाउँदो ज्वाइँ नभेटेर हैरान छन् । कति ठाउँबाट कुरा आयो, कहाँ के मिल्दैन-मल्दैन ।, लगन नजुरेरै होला । बालाई मास्टर्स डिग्री गरेको, अलि खानदानी, सम्पत्तिवाल र जागिरे केटो चाहि...
मानिस सामाजि प्राणी अर्थात् सोसल एनिमल हो । यसकारण पनि ऊ एक्लै जिन्दगी बाँच्न सक्दैन । मानिसँग घुलमिल, बातचीत, घुमघाम यी सबै मानिसलाई एक्लोपनबाट टाढा राख्ने माध्यम हुन्, जुन जरुरी पनि छ । तर, यसको विपरित यदि कोही एक्लै हुन्छ, भेटघाटमा सरिक हुँदैन, अरु मानिसँग समय व्यतित गर्न रुचाउँदैन भने यसलाई एक समस्याका रुपमा लिन सकिन्छ । यही कारण होकि, एक्लोपनलाई सजायको रुपमा प्रयोग गरिँदैछ । मान्छेलाई...
ज्योतिषलाई पनि २ हजार कर !
काठमाडौ । सांसद हृदयेश त्रिपाठीले कर विरुद्धको आन्दोलन सुरु भइसकेको भन्दै तत्काल कर वृद्धिको सम्बोधन नभए संघीयता खतरामा पर्ने चेतावनी दिएका छन् । सोमवारको संसद बैठको विशेष समयमा बोल्दै उनले स्थानीय सरकारले मनोमानि ढंगले कर लगाउने काम गरिरहेको भन्दै उनले त्यस तर्फ तत्काल गम्भीर हुन सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । उनले कर वृद्धिको समस्या सम्बोधन समयमै गर्न नसक्ने हो भने त्यसले संघीयतालाई...